Umgquba owenziwe ngeentsiba zenkukhu | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Izigidi zeetoni iintsiba Inkukhu kunye nekhabhon diokside, into ebangela ukuphazamiseka kwemozulu, ikhutshwa minyaka le emhlabeni. Ukudibanisa ezi zimbini kuvumela ukufumana uhlobo olutsha lwe isichumiso Enkosi ngenkqubo yemichiza elula, kunye nemveliso yesibini enokusetyenziswa njengearhente yokuthintela ukungangeni manzi.
Ihlabathi linabantu abaqikelelwa kwizigidi ezili-19.000 iinkukhu, elo nani liphindaphindwe kabini elinesiqingatha kunenani labantu. Ukusetyenziswa kwe- iintaka I-5 yezigidi zeetoni zeentsiba ziyavela minyaka le. Uninzi luphela kukhuphelo apho luhlala khona amashumi eminyaka.
Emva kwenguqu ibe iplastiki, kwi-hydrogen-based fuel, kwizinto ezidibeneyo, ukusetyenziswa okutsha okunokwenzeka, kuye kwaveliswa ngu Guqula Chen Ukusuka China University of Science and Technology e Hefei, Anhui kwiPhondo, ukwenza isichumiso.
Ukubola ngu ipyrolysis 1 g weentsiba ku-600º C iiyure ezi-3 kwikharbon diokside, 0,26 g we nebhiKharbonati de iammonium. Le mveliso ke ingasetyenziswa njengomgquba. Ukuba ushushu ukuya kuma-60º C, uyakhupha iammonia, Isebenziseka njengomgquba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Ezolimo zendalo » Umgquba owenziwe ngeentsiba zenkukhu
UJohn Gunsha sitsho
Inqaku elihle kakhulu apho unokufumana khona ulwazi oluthe kratya kwesi sihloko
Phendula kuJuan Gunsha